admin September 5, 2019 September 5, 2019 No Comments on GABAYADA SOOMAALIDA PDF
Author: Gardall Mibei
Maqal Maxaa ka dhalan kara ka bixitaanka soo,aalida Mareykanka ee dalka Suuriya? Dhoodaan Sayid Maxamed M. Iyo qaar kaloo badan, Waxaa sidoo kale hadda soo baxay Webab daneeyay gabayada iyo sugaanta Soomaaliya.
Waxay ka billaabatay Bariga Soomaaliya, waxaana billaaby Cali Sharmarke. Gabzyada u fiirso saddexda beyd ee ugu horeeya wuxuu kaga jawaabay afartan hoose. Qalabka shaqada Maxaa meeshaan la xiriiro Isbedelada la’xiriira Soo geli file bogagga khaaska ah Linkiga soomaalidq ah Macluumad ku saabsan Qaybta caddeynaha Boggaan soo xigo. Qormadan waxaan ku dulmari doonaa gabayada taxanaha noqda ee labo gabayaa ama ka badan ay ka qeyb qaataan iyaga oo istixraacaya, gundhacooduna u noqonayo hal dhacdo ama mawduuc.
Waxay ka koobnayd ugu yaraan 13 gabay waxayna ka billaabatay Iriirka Siiga Boqorka oo ku yaala banka caanka ah ee Qorraxeey. Wuxuu ka dhawray qadaf, beyd dalab leh, iyo wax gabayaada oo anshaxa iyo dhadhanka gabayga dili. Waxay dhexmartay laba qoys oo Ogaadeen ah sida cinwaankaba ka muuqata, waxayna socotay muddo dheer.
Haddii isaga oo gabay ka jawaabaya abwaanku mid tiriyo, waxaa billowda silsilad ama labadaa abwaan ku koobnaata ama kuwa kale ay soo galaan. Maxamuud inkasta oo uusan dhaliilsanayn badanka ragga isu afceliyey haddana wuxu liiday mawduuca guud, gaar ahaanna dhawr nin ayuu guryo-noqosho ku tuhmayey.
Tixdaa gavayada ka mid ahaa: Hurgumo waa silsilad aadkii uu shiniyeeyey Khaliif Sheekh Maxamuud. Dhawr abwaan oo Hal-abuur wanaagsan leh ayaa ku jiray. Ninkaa dambe waxaa magac ugu baxaa beyd gaab iyo gbayada ciil, waxaana lala mataaniyaa macallin qoryaale iyo kitaab gaab aan Todobada Mingaliyo iyo Suddamada dhinacna u dhaafin.
Ha yeeshee, waxaan isku dayey akhristaha inaan farta ugu fiiqo buugga, iyaga oo dhammaystiran, ay markoodii horeba ku soo baxeen, haddiiba buug ay ku soo baxeeni uu jiro.
Kuwani waa bogag dibedda ah, waxayna ku furmayaan bog cusub. Waxaa laga keenay ” https: Your email address will not be published. Waxaa ka mid ahaa: Cabdi Galayax ayey intaasi si gooni ah u dhibtay oo jawaab ka bixiyey. Silsiladdani waxay ka mid tahay kuwa ugu magac dheer suugaanta Soomaaliyeed xilliga ay socotay, deegaanka gaabayada ka curatay, raggii soo galay, mawduuca ay ku saabsanayd, iyo sababo kale awgood.
Arinbaa ku ciirtay, dabadeed. Qawdhan ayaa gabaygii dhibsaday oo tix kaga soo jawaabay. Waxay ka billaabatay Doollo. Qalabkan aad haysato kuma ciyaari kartid maqalkan iyo muuqaalkan. Wuxuu haddaba isugu yeedhay abwaano dhawr ah oo inay. Waxaa la xaqiijiyey in Khaliif Carabaha joogay markii uu gabaygii ugu horeeyey mariyey. gabayads
Aad kasta oo gabayadw u furan tahay halabuurka inuu badda maansada ee la isku harqinayo is daadraaciyo, haddana waxay u badan tahay inay abwaanadu kolba say ugu kala ehelsanyihiin u jawaabaan.
Qawdhan ayuu haddaba arintaa ku gawriyey oo wuxuu Xarbi mariyey tix ay.
Qofka suugaan aqoonta ahi markii uu arko gabayo isku xidhan oo isu jawaab ah, wuxuu markiiba garan karaa ragga ay ku haboon tahay inay ka qeyb qaataan isaga oo la kaashanaya kalasoociisa ku dhisan abwaan walba heerka uu ka gaadhay maleega iyo curinta gabayga. Baadhis ayey mudan tahay.
Magacu wuxuu ka raacay beydkii Saahid ee ahaa: Waxay suugaanleydu ku mashquulaan oo ay in badan xiskooda ku gedgediyaan baratansiinta abwaanada isu jawaabay. Rag dhawr ah gagayada gabya ayaa arintaa ka maqsuuday oo gabayo badan tiriyey. Waxay ahayd mid abwaano si gooni ah isu yaqaana, isku raasna kasoo jeeda oo is hadal fahma u dhaxaysay. Deelqaafka iyo gebidhacu saw.
Ssoomaalida nin oo midkood walba af-hayeen u ahaa qoyskiisa waxay is dhaafsan gabayzda gabayo badan oo dhaadasho iyo goodiba isuga jiray. Guba waxay curatay abbaaraha horraantii aad, waxayna socotay muddo 10 sano ku dhow.
Silsilad walba ragga isagu dhibidhacsada ayey la heer tahay oo ay aragtidooda iyo garaadkooda suugaaneed ka tarjuntaa. Khaliif oo dhinac ah iyo intooda kale oo dhinaca zoomaalida ah ayey ku socotay, waxaase ugu cadcaddaa ragga Khaliif geed walba ka saaray Dharbaaxo Jin oo aad moodo inuu si gooni ah ubbada ugu biyeystay inaan Khaliif kala nabar dambayn.
Maax Dhagoole Ogaadeen ayaa markii ay gabayadii ay is dhaafsadeen Camanje, Cali Geele, Beenaleey loo geeyey wuxuu isna ku darsaday gabay ay ka mid ahayd: Mid kale ayaa dubaaqiisa, lid ama taageero, cabbira oo ama jawaab garaabid ah bixiya ama mid gawrin ah dhiiba. Dharbaaxo Jin wuxuu gabay-hayeen u ahaa Soomaalida inteeda kale Khaliifna qoyskiisa.